Izindaba zezinkokhelo ezikhethiwe zemali ezisikweletu ziye zisikhuthaza iminyaka eminingi ukuthenga amathikithi e-lottery amashumi eminyaka. Ezweni ngalinye kunezinhlobo zokuzibuza, kepha ama-lottery ase-USA aphumelele ukudumile kuwo wonke umhlaba. Izindleko ezinkulu, umkhankaso wokukhangisa olungile, intengo yamathikithi encane - konke lokho kwanezela ekuthandeni okwandayo kwemikhosi yaseMelika. Izakhamizi zamazwe amaningi aziphuthelwa ithuba lokuncintisana nabakhileyo base-United States futhi zithengwa amathikithi ngamandla kanye nokuyinhloko. Unentshisekelo? Ake sizame ukuchaza ama-lottery amahle kakhulu e-USA kulesi sihloko.
Leli lottery laseMelika, mhlawumbe, lingenye yezidume kakhulu ezweni. Ngenxa yenani elidlalwayo, ukunqoba kwe-jackpot ngayinye kwenza ukushayela kwangempela. Futhi futhi, ngoba inani elincane lalingamadola ayizigidi ezingu-40. I-lottery iqhutshwa njalo ngemva kwamasonto amabili, okuqhubeka nokuvuselela isithakazelo salabo abathintekayo.
Imithetho yomdlalo ilula kakhulu. Umhlanganyeli kufanele akhethe futhi abonise izinombolo ezingu-6 kuthekithi. Ezinhlanu zazo kufanele zibe ebangeni kusukela ku-1 ukuya ku-69 (okuthiwa yi-amabhola ezimhlophe), nomunye ongu-1 ngaphezulu kusuka ku-1 kuya ku-26 (amabhola abomvu). Ngakho-ke, izinombolo ezengeziwe zizoqagela ngesikhathi sokudweba, okubaluleke kakhulu umklomelo uzoba. Ngokwesilinganiso, uma inombolo 1 ivumelana, umhlanganyeli uzothola cishe ama-dollar angu-4, futhi kuwo wonke ama-6 - avela ezigidini ezingu-40 nangaphezulu. Izindleko zetikithi zingu-2 dollar. Uma uthenga, ungase ukhokhe kancane futhi uthole ithikithi elikhethekile, elikuvumela ukuthi ukwandise inani lokunqoba ngezikhathi ezimbili noma ezintathu. Noma kunjalo, lo mthetho awusebenzi kuma- jackpots . Uma unqoba imali eningi, lo winner unelungelo: noma ukuthola imali yonke ngokushesha, ukukhokhela intela eyandisiwe, noma ukwahlukanisa ukuwina ngokukhokha ngonyaka ka-30. Unyaka ngamunye, i-lottery izokwandisa inani elingama-4% ngenxa ye-inflation.
Izindleko ezinkulu kunazo zonke e-lottery "ye-Powerball"
I-lottery yase-US idlala amanani amaningi, abaningi bakholelwa ukuthi kungenzeka ukunqoba kwabo. Futhi ngokuphelele ngeze, ngoba njalo ngonyaka imali iyabantu abahluke ngokuphelele. Kodwa "i-Powerball" ene-jackpot ephezulu kunazo zonke.
NgoMeyi 2013, uGloria Mackenzie oneminyaka engu-84 ubudala wanqoba i-jackpot, eyathenga ithikithi esitolo. Ukuwina kwakhe ngaleso sikhathi kwakuyirekhodi lomlando weli lottery futhi lilinganiselwa ku-590 million dollar. Wanquma ukuthola i-jackpot ngokuphelele, futhi ngenxa yezimali zokukhokha intela inani lehle, lilinganiselwa ku-370 million. I-jackpot enkulu elandelayo yadlala ngo-2012. Kwakungaphansi kwezingu-585 million. Wahlukanisa ngaso leso sikhathi ababili ababambiqhaza, ngamunye wabo owathola izigidi ezingu-190 ngamunye. Ngo-2015, i-jackpot yayingu-565 million, okwahlukanisa abahlanganyeli abangu-3. Omunye wabo wayevela ePuerto Rico. Ukunqoba kwakhe kwaba yimpumelelo yokuqala ngaphandle kwe-United States. Ngonyaka we-2016, i-jackpot yafinyelela amanani okurekhoda futhi yafinyelela ku-1.5 billion, okwakudlala ngabadlali abangu-3 ngesikhathi esisodwa.
Lottery "I-Mega Millions"
"I-Mega Millions" enye i-lottery enkulu yaseMelika. I-jackpot yakhe yokuqala yadlalwa emuva ngo-2002, futhi kusukela ngaleso sikhathi ingenye yemibuzo evelele kakhulu. Imithetho yayo ifana namanye ama-lottery ase-US. Abahlanganyeli bamenywa ukuthenga ithikithi le-lottery, elibiza ama-dollar angu-1-2. Ukuwina i-jackpot, umdlali uzodinga ukuqagela izinombolo ezingu-6. Ukuqagela inombolo encane kakhulu yamadijithali, ungaphinde uzuze inani elihle. Ngokuphelele kuleli lottery kunezinhlobo ezingu-9 zokunqoba. Futhi ubukhulu obuncane be-jackpot bungaba amadola ayizigidi ezingu-15.
Impumelelo lapha ingaphansi kancane kunabanqobi beli "lotball" lottery. Amaphuzu amakhulu kakhulu emlandweni adlalwe ngo-2011, lapho kudlalwa amadola ayizigidi ezingu-350. Imali ingabuye yamukelwe njengenkokhelo yesikhathi esisodwa, ngokunqunywa kwentela eyengeziwe noma ukukhokhwa kwonyaka iminyaka engama-30. Amathuba okuwina okukhulu kuncane. Ngokusho kochwepheshe, cishe ngo-1: 250 000 000. Umklomelo omncane wokuwina ulula. Lapha kungenzeka ukuthi u-1: 15.
I-Lottery yeNew York
I-New York Quiz idlala amanani amancane kunama-lottery ase-US odlule, kodwa noma kunjalo enye ethandwa kakhulu ezweni. Yasungulwa ngo-1966 ngesicelo sabakhileyo edolobheni. Yonke imali engenayo kusuka e-lottery iya ukusekela imfundo esifundeni. I-jackpot encane ingaba yizigidi ezingu-2 zamaRandi.
Abadlali badinga ukukhetha amabhola angu-6 ukusuka ku-59 kungenzeka, futhi futhi ibhola elilodwa. Ukuwina, udinga ukuqagela okungenani amabhola amathathu. I-jackpot ithola lowo okhomba ngokuqondile wonke amabhola. Ingqikithi kunezinhlobo ezingu-5 zamanani emdlalweni. Njengamanye ama-lottery ase-US, iNew York idlala ama-jackpots kabili ngesonto. Lo mbukiso usakazwa kuzo zonke iziteshi ezinkulu zethelevishini zomuzi, kanti nezakhamuzi zakwamanye amazwe imiphumela iphindwe kabili kuwebhusayithi esemthethweni. Ngokwesilinganiso, ithuba lokuwina inani eliphansi ngu-1:45.
I-California Super Lotto
Akuthandwa kakhulu yi-Imibuzo, egcinwe esifundeni saseCalifornia. Yasungulwa ngo-1986, futhi i-jackpot yayo encane ingaba izigidi ezingu-7. Njenge-lottery eNew York, i-Super Lotto ithumela inzuzo yayo ukusekela imfundo yasendaweni. Ingxenye yemali isetshenziselwa ukukhokha imiklomelo, kanye nomholo wabathengisi bethikithi. Imiklomelo yokudweba ibanjwe izikhathi ezimbili ngesonto: NgoLwesithathu neMigqibelo. Uma i-jackpot ingadlalwa, idluliselwa ku-ether elandelayo, ikhula ngesayizi. Ngakho-ke, umklomelo ophezulu wonqobile ngo-2010, futhi waba ngama-dollar ayizigidi ezingu-195.
Imithetho yomdlalo cishe ayifani nezinye i-lotto ezinkulu. Umhlanganyeli udinga ukuqagela ukulandelana kwezinombolo eziyisisekelo eziyisishiyagalombili, futhi nenombolo eyodwa eyengeziwe. Uma zonke izinombolo ezingu-6 zifana, umdlali uyazuza ngokuthola i-jackpot. Ithuba lokuwina okungenani inani elincane elangeni le-lottery likhulu ngokwanele futhi lilinganiselwa ku-1:25. Njengoba unqobile imali eningi, ungakwazi ukuyifaka ngokushesha, noma uthole inkokhelo yonyaka phakathi neminyaka engu-26.
Ama-lotti aseMelika asheshayo
Ama-Lottery ase-USA naseYurophu athandwa kakhulu, kodwa akubona wonke umuntu othanda ukuchitha ubusuku ku-TV, elinde umdwebo wehoklomelo. Laba bantu kufanele bamenywe ukuba babambe iqhaza kuma-lottery esheshayo, abuye ajwayelekile e-US. Asikho isidingo sokukhetha noma yiziphi izinombolo. Kwanele nje ukuthenga ithikithi bese usula insimu yayo yokuzivikela. Yiqiniso, lapha awukwazi ukunqoba izigidi zamaRandi. Inani elilinganayo lezinqola lingama-dollar angu-20 kuya ku-30.
Amathikithi we-lottery esheshayo athola abathengi ngokulula nokukhanya kwawo. Ngakho, imibuzo ye "Michigan Ducks" inikeza abadlali bayo ukusula ungqimba oluvikelayo futhi bathole inhlanganisela yamadada aphuzi abomvu.
Ngamunye wethu ngezinye izikhathi ufuna ukuzwa inhlanhla. I-Lottery yase-USA, ukubuyekezwa mayelana nokuthi yikuphi okuhle kakhulu, kuyoba yindlela enhle kakhulu yokugembula abantu. Ngisho nomuntu ongahlali eMelika angathenga ithikithi. Ngezinye izikhathi kufanele uthathe amathuba, ngoba ngubani owaziyo, mhlawumbe kuyoba nguwe oyoba ngumdlali onenhlanhla olandelayo owathola i-jackpot enkulu.
Minx (manicure) - ukuphelela kalula komuntu
Lapho eMoscow ukushintsha ruble ku hryvnia: imithetho eyisisekelo